Galmudug: 30-ka bishaan wey dhaceeysaa doorashada madaxweynaha – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Galmudug: 30-ka bishaan wey dhaceeysaa doorashada madaxweynaha
Guddiga doorashada maamulka Galmudug ayaa sheegay in 30-ka bishaan April ay magaalada Cadaado ka dhici doonto doorashada xilka madaxweynaha maamulkaasi.
Guddoomiyaha guddigaasi Maxamed Xasan Geelle ayaa sheegay in ka guddi ahaan ay meel gebo-gebo ah u mareeyso howlaha doorashada, islamarkaana diyaar u yihiin in waxwalbo lagu dhammeeyo sidii loo ballamay.
Wuxuu sheegay guddoomiyaha inaysan wax shaqo ah isku laheyn doorashada maamulka Galmudug iyo wadahadalka ay kula jiraan Ahlu-sunna Waljameeca.
Sidoo kale, guddoomiyaha ayaa tilmaamay in iyaga oo tixgelinaya dowladda federaalka Soomaaliya ay dib u dhigeen waqtigii loo ballamay doorashada, balse wixii hadda ka dambeeya ay sidii lagu ballamay wax ku wadi doonaan.
“Annaga dowladda waan tixgelinnay, wixii hadda ka dambeeya dib u celin, ama hakin midna maleh, waxaan idiin sheegayaa in 30-ka bishaan ay dhici doonto doorashada” Sidaas waxaa yiri guddoomiyaha guddiga doorashada maamulka Galmudug Maxamed Xasan Geelle.
Si kastaba, magaalada Muqdisho waxaa si dadban uga socda wadahadal ay leeyihiin xubno kala matalaya maamulka Galmudug iyo Ahlu-sunna Waljameeca, waxayna wadahadaladaan ku dhaw yihiin inay fashilmaan.